Ithemba kumaBoks kweyoMhlaba
UMDLALI wamaProteas uRassie van der Dussen, iBrand Director yeCastle Lager uVaughan Croeser nephini likakaputeni kwiBafana Bafana * -Itumeleng Khune ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni iCastle Lager Heartbeat Of The Nation eLoftus Versfeld Stadium Isithombe: SITHUNYELWE
sihle ndlovu | August 29, 2019
LIKHULU ithemba lokuthi iqembu lebhola lombhoxo amaBhokobhoko, lizokwenza kahle kwiNdebe yoMhlaba eqala ngoSepthemba 15 eJapan.
NgoMsombuluko umqeqeshi, uRassie Erasmus, umemezele iqembu eliqinile elizomela iNingizimu Afrika eJapan. Okwenza kubukeke ezokwenza kahle amaBhokobhoko ukuthi kulo nyaka asashaye into ecokeme njengoba esayiwine yonke imidlalo ayidlalile.
Iqembu lakuleli liwine iCastle Rugby Championship eliyidlala neNew Zealand, Australia ne-Argentina. Lokhu kwenze lanyuka ithemba ngezika-Erasmus ezizovula iNdebe yoMhlaba neNew Zealand. Eqoqweni leNingizimu Afrika kukhona iNew Zealand, Italy, Namibia neCanada.
UVaughan Croeser oyiBrand Director kwaCastle Lager, engabaxhasi abakhulu bamaBhokobhoko, uthe yize bengawathathi kancane amazwe aqhathwe neNingizimu Afrika likhulu ithemba lokuthi iqembu lizodlulela phambili.
“Kumele sibhukule silole eyethu imikhonto kuqala. Uma ubuka iqoqo esikulona kubonakala sengathi sizodlulela phambili,” kusho uCroeser.
Noma ekhuluma kanje lo mbhemu kodwa kuyavela ukuthi njengabaxhasi bafisa ukuthi amaBhokobhoko ahambe ibanga elide kwiNdebe yoMhlaba. Lokhu kuhlaluke esechaza ngabazimisele ukukwenza njengeCastle uma iqembu lifinyelela kowamanqamu.
“Sizibophezele ekutheni uma amaBhobhoko ewina owandulela owamanqamu sizothengela sonke isizwe ubhiya (iCastle). Uma lokho kwenzeka siyaqinisekisa ukuthi sizosigcina isethembiso. Okumele ukwenze ukushaya inombolo ethi *120*1895# bese uyabhalisa uqinisekise ukuthi uneminyaka ewu-18 nangaphezulu. Uzobe usuthola i-voucher yokuyolanda ubhiya kunoma yisiphi isitolo esisebenzisana naso esidayisa iCastle,” kuchaza uCroeser.
Uthe bajabule ngefomu yamaBhokobhoko, wathembisa ukuthi bayohlale bewaseka.
“Noma izinto zingasahambi kahle siyohlale siyingxenye yamaBhokobhoko. Empeleni kulo nyaka besizibophezele ukweseka iBafana Bafana, amaBhokobhoko namaProteas. Kona akwehlanga kahle ukuthi amaProteas ashaye into ephansi kwiNdebe yoMhlaba kodwa sisaweseka kakhulu,” kuphetha uCroeser.
Imidlalo yamaqoqo yeNingizimu Afrika:
Septhemba 21: New Zealand v South Africa (Yokohama)
Septhemba 28: South Africa v Namibia (Toyota)
Okthoba 4: South Africa v Italy (Shizuoka)
Okthoba 8: South Africa v Canada (Kobe)